စစ်ဘီလူးတွေရဲ့ ပန်းဦးချွေ ပွဲထဲ
အတင်းကျော်ခွလာပြီး ဖတ်ရတာ အားနာလိုက်တာ..
ဟူးးးးးးးးးးးး အဲ့လိုသာအားနာကြေးဆို အားနာလွန်းလို့ သေသွားနိုင်တယ် အမရေ ..း)
;) ကိကိ ကိ..။မနေ့တုန်းက မီးတနေ့လုံးမပြတ်တော့
ဘယ်သူ့အားနာမိနေမှန်း မသိ။မနေတတ်၊မထိုင်တတ်ကြီး ဖြစ်တာတောင် သွားသတိရမိတော့မယ်..။
တူတာတော့ မတူဘူးပေါ့။အားနာတာတော့ အားနာတာပါပဲ..။
မှတ်ချက်၊။ ပြောချင်တာတွေ ပြောထားခဲ့ခြင်းသာ။
အားနာတယ် ကေ ..
ဘာကြောင့် အားနာရမှန်း မသိသေးတဲ့ လူငယ်တွေလည်း ရှိနေသေးတာကို ကျနော်ကတော့ ပိုအားနာနေမိတယ်...
့ပြာရီးပြာရာ ဖတ်ပြီး ပြန်ပြေးရတာလဲ..အားနာတယ်
အားနာရတာတွေများလွန်းလို့ အားနာတယ်လို့ ပြောရမှာ အားနာတယ်
ခပ်ထေ့ ထေ့ ၊ခပ်လှောင်လှောင် ရေးဖွဲ့ ထားတဲ့ကဗျာ
တစ်ပုဒ်လို့ ထင်တာပဲ။ ကိုယ်က မှန်တယ် ထင်တာလေး
ပြောလို့ ဖြစ် ပါ့ မလား ဆိုပြီး အောင့် အီး မျိုသိပ်ထားနေ
ရရင် ကိုပဲ အားနာ လို့ ၊အားနာတယ် လို့ ပဲ ပြောလာကြတယ်
အားနာလို့ အားနာရမှန်း မသ်ိသေးတာကိုလည်း အားနာတယ်။
မသိတာကို မသိဘူးလို့ မပြောနိုင်တာကိုလည်း အားနာတယ်။
အားနာရမယ်ဆိုရင်တော့ အားနာစရာတွေက အများကြီးပဲ မကေရေ...
Not Mahar Myat Muni . You must use Mahar Muni . Please find and read at Lu Daw Amar Books .